दाङमा ‘धूपघडी’ राखिँदै, के हो ‘धुपघडी’ ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
दाङमा ‘धूपघडी’ राखिँदै, के हो ‘धुपघडी’ ?
४ चैत, दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दुई स्थानमा परम्परागत धूपघडी राख्ने भएको छ । नयाँ पुस्तालाई ऐतिहासिक घडीको बारेमा जानकारी दिन दुईवटा सो घडी तयार पारिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार एउटा तुलसीपुरको बेलझण्डीमा उद्यान निर्माण गरी र अर्को तुलसीपुर–७ स्थित पर्यटकीयस्थल गणेशपुर उद्यानमा ती घडी राखिनेछ । ‘हामीले परम्परागत दुई वटा घडी तयार पारेका छौँ’, उनले भने, ‘ती घडीमध्ये एउटालाई बेलझुण्डी र एउटा गणेशपुर उद्यानमा राख्ने तयारी गरेका छौँ ।’
खगोलविद् सहप्राध्यापक जयन्त आचार्यले घडी तयार पारेका हुन् । परम्परालाई जीवन्त राख्न धूपघडी ल्याइएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलसचिव अधिकारीले बताए । ‘पहिलेदेखि पुर्खाले प्रयोग गर्दै आएको औजार वा त्यससम्बन्धी जानकारी वर्तमान पुस्तालाई बुझाउनका लागि पनि एकदमै महत्वपूर्ण छ’, उनले भने, ‘यो घडीले प्रत्येक जिल्लामा फरक–फरक समय देखाउने छ ।’
उनले घडी घाम लाग्ने ठाउँमा मात्रै राखिने बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ स्थित राप्ती शान्ति उद्यान (गणेशपुर उद्यान) मा वैशाखसम्म घडी राख्ने गरी तयारी भइरहेको उद्यानका अध्यक्ष डिल्ली भण्डारीले जानकारी दिए । घडी हेर्नका लागि पर्यटक आउने विश्वास गरिएको छ । रासस
Previousह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीको मूल्य
Nextकोरोना अपडेटः संक्रमित १ लाख ८२ हजार, मृतक ७ हजार १ सय